7 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ ग्लेम्पि Pla स्थानहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ ग्लेम्पि Pla स्थानहरू
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 11/04/2021)
चरिहरु गाउँदै गइरहेको, संग लुभावनी दृश्य तपाईंको ढोकाबाट, एक विलासी युर्ट वा ट्रीहाउसमा. युरोपको सबैभन्दा सुन्दर स्थानहरूमा ग्लेम्पि these्ग आजकल ठूलो प्रवृत्ति हो. अर्को7युरोपमा उत्तम ग्ल्याम्पिंग स्थानहरूले आरामदायी वातावरणको अनुकूल मैत्री छुट्टी अनुभव प्रदान गर्दछ. हरियो बिजुलीको साथ, रिसाइक्लि, र--तारे होटल भत्ता, यूरोपमा ग्ल्याम्पिंग छुट्टीको अन्तिम दिगो उपाय हो.
1. यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ ग्लेम्पि Pla स्थानहरू: नेदरल्याण्डमा Veluwe प्रकृति रिजर्व
Veluwe को मनमोहक जंगल मा मैनबत्ती प्रकाश, पहिलो सूर्य किरणहरूको साथ रूखहरूको बीचमा हिंड्दै. यो पहिलोमा काल्पनिक ग्लाम्मिing अनुभवको सबै अंश हो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेदरल्यान्ड मा. तपाईले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ2प्रकृति भण्डार: Veluwezoom National Park with the most beautiful viewpoint the Posbank, वा Hoge Veluwe, पैदल यात्रा उत्साहीहरूका लागि स्वर्ग.
यी देशहरूमा सबै भन्दा राम्रो समय को लागी, तपाईं सुन्दर यूर्टमा बस्न रोज्न सक्नुहुन्छ, सफारी पालहरू वा ट्रीहाउसहरू, Veluwe मा Glamping आवास विकल्प. उदाहरणका लागि, शेन्केनशुल प्रकृति रिजर्व, Hoenderloo नजिक, का लागि उत्तम स्थान हो परिवार शिविर, मा घर सुविधा र सुविधा छोड्नु बिना.
ब्रसेल्स एम्स्टर्डम एक ट्रेन संग
एउटा ट्रेनको साथ लन्डन एम्स्टर्डम
बर्लिन एम्स्टर्डम एक ट्रेन संग
पेरिस एम्स्टर्डम एक ट्रेन संग
2. फ्रान्स मा Echologia Glamping स्पट
मायेन्नेमा सबैभन्दा ठूलो जल भण्डारको किनारमा, तपाईं ग्लैमरस इको-मित्रवत आवास पाउनुहुनेछ. ला लोयर उपत्यकामा तपाईं फ्लोटिंग केबिनमा बस्न सक्नुहुन्छ, वन केबिन, वा लक्जरी पाल.
छतमा बिहानको खाजा, नदीमा क्यानोइing, वा एक गिलास वाइनको मजा लिनु भनेको केवल यहाँ केही बत्तीहरू हो जुन तपाईं यहाँ झल्किरहेको बेला पाउनुहुनेछ. ला लोइर उपत्यका हो रक्सी क्षेत्र फ्रान्समा, त्यसैले, क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ मदिरा तपाईंको लक्जरी पाल वा केबिनबाट केहि चरणहरू पछि. इकोलोजीया का लागी एक उत्कृष्ट झलक हो एकल यात्री फ्रान्समा, र परिवार छुट्टी मनाउने.
Nantes एक ट्रेन संग यात्रा
Lille एक ट्रेन संग यात्रा
पिलिस एक ट्रेन संग लिली
3. यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ ग्लेम्पि Pla स्थानहरू: रोन-आल्प्स फ्रान्समा रोमान्टिक Glamping
तारा मुनि सुतिरहेको, बाहिर हिउँ पर्ने बेला चूलोले वार्मिंग गर्दै, फ्रान्सेली आल्प्स एक जादुई झलक हो. फ्रेन्च आल्प्समा रोहन क्षेत्र यूरोप मा एक उत्तम ग्लिमिंग स्थान हो. यसरी, तपाइँसँग विलासी हरियो गुम्बज वा घण्टा पालमा तपाइँको आफ्नै हिउँद परी कथा छुट्टी हुन सक्छ.
तथापि, यदि तपाइँ वसन्त छुट्टी रुचाउनु हुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं पूरै खिलमा आल्प्सलाई प्रेम गर्नुहुनेछ. तपाईको बिहानको कफी पाउनु भएको छ, जंगली प्रकृतिले घेरिएको, जीवनमा एक उत्तम अनुभव हो. साथै, अधिक सक्रिय छुट्टी को लागी, तपाईं शानदार पर्वतहरू हाईक गर्न सक्नुहुन्छ वा अर्डेचे नदीमा राफ्टिंग गर्न सक्नुहुन्छ.
किनकि यो इटाली र फ्रान्स बीच हो, तपाईले यसलाई धेरै सजिलो पाउनुहुनेछ त्यहाँ रेल बाट यात्रा.
पेरिस एक ट्रेन संग प्रोवेन्स गर्न
एउटा ट्रेनको साथ प्रोभीन्स गर्न लियोन
एउटा ट्रेनको साथ अगाडि जान मार्सीलिज
4. मध्य बोहेमियामा ग्ल्याम्पिंग, प्राग
बोहेमिया चेक गणराज्यको एक पोस्टकार्ड क्षेत्र हो. यसको अद्वितीयता क्षेत्र को मौसममा परिवर्तन संग पोशाक परिवर्तन गर्न मा निहित छ. गर्मी मा तपाईं यसलाई हरियो र भव्य पाउनुहुनेछ, and in the fall in beautiful golden and orange tones. On the banks ofalake, हिमाल चुचुराहरू, वा निर्जन वन, बोहेमियाको ओएसिस प्रागबाट एक घण्टाको दूरीमा छ, ताकि तपाईं सबै संसारको सबै भन्दा राम्रो आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, प्रकृति को हृदय मा.
Lipno तालको वरिपरि वा Jizera हिमालहरूको नजिक ग्ल्याम्पिंग आवास छ. यसरी, तपाईं उत्कृष्ट ताल र वन दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तपाईंको छतबाट, वा प्रकृतिमा निजी तातो टब.
5. यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ ग्लेम्पि Pla स्थानहरू: स्विस आल्प्समा लक्जरी Glamping Pods
सर्वश्रेष्ठ स्की स्लोपहरू, उत्तम विचार, तपाईंको ग्लिम्पिंग गुम्बज ढोकामा ठीक. को स्विस आल्प्स एक जादुई गन्तव्य हो कुनै पनि मौसममा, र अब तपाई केन्द्रमा रहन सक्नुहुन्छ. जबकि स्विस आल्प्स दुनिया भर बाट पर्यटकहरु को लागी एक लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्य हो, धेरैलाई यसको एक झलक स्थानको रूपमा थाहा छ.
आल्प्समा ग्ल्याम्पिंग आवास पूर्ण रूपमा सुसज्जित छ र एक निर्मलका लागि डिजाइन गरिएको छ, र अचम्मको बसाइ. तपाईं हिउँ टोपीको बीचमा रहन सक्नुहुन्छ, तर तपाईंको लक्जरी डोम भित्र, यो न्यानो र आरामदायक हुनेछ. तपाईं सुरम्य दृश्यहरुमा उठ्नुहुनेछ, तपाईंको आरामदायी ओछ्यानबाट सिधै पैदल यात्रामा जानुहोस्, एक स्वादिष्ट नाश्ता पछि.
दृश्यहरु, स्वच्छ हावा, र बहुमुखी ट्रेल्स स्विस आल्प्स को एक बनाउँछ7युरोप मा सबै भन्दा राम्रो झिलमिलाउने ठाउँहरू.
6. Puglia मा लक्जरी Glamping तम्बू
एड्रिएटिक र आयोनियन समुद्रहरूको नजिक अवस्थित, Puglia एक हो काल्पनिक स्थान युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ग्ल्याम्पिंग छुट्टी को लागी. छालहरूको आवाज, मूल निलो पानी, साँझको हावा, र इटालियन खाना, यो यो भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न सक्दछौं. हुनत, लक्जरी पालमा ग्लाम्पिंग, होटलको भत्ताहरूको आनन्द लिँदै, तपाईंको बजेटमा सम्झौता नगरी – ग्लेम्पि्ग यी दिन बिदाको अन्तिम तरिका हो.
Puglia ग्ल्याम्पिंग को लागी एक शानदार स्थान हो, समुद्रमा वा पहाडको टुप्पोमा समुद्रबाट ओर्लिरहेको तपाईंको पालबाट बाहिर निस्केर, कसैको सपना हो. तपाइँ अपुलिया गाउँमा ग्लैम्पिंग आवास विकल्पहरूको धेरै पाउनुहुनेछ.
समुद्रको यो ओएसिस रोम र बारीबाट रेलमा पहुँचयोग्य छ.
एक ट्रेन संग रोम पुग्लिया
रेलको साथ पुग्लियामा नेपल्स
एउटा ट्रेनको साथ पारी पुग्लिया
फ्लोरेन्स एक ट्रेन संग Puglia गर्न
7. टस्कनीमा रोमान्स र ग्लेम्पि।
रोमान्स भनेको शब्द हो जुन टस्कनीमा सब भन्दा राम्रो झलकको वर्णन गर्दछ. Sienna बाट टाढा छैन, र भूमध्यसागर, टस्कनीको मखमल हरियो पहाडहरूमा, रोमान्टिक र हरियो पालहरूको लागि छुट्टीको लागि प्रतीक्षा गर्दै 2.
टस्क्यानी मा, तपाईं ट्रफल्सको खोजीमा जान सक्नुहुन्छ, takeacooking class and prepare pasta for dinner. वैकल्पिक, तपाईं वरिपरि चक्र गर्न सक्नुहुन्छ भव्य इटालेली गाउँहरू तपाईंको बाट अल्छी जैतुन Glamping साइट. यसबाहेक, टस्कनीमा ग्ल्याम्पिंगले तपाईंलाई प्रकृतिको अंश महसुस गर्दछ, जैतुन रूख पछाडि tucked.
फ्लोरेन्स एक ट्रेन संग Grosseto गर्न
Perugia एक ट्रेन संग Grosseto गर्न
एक ट्रेनको साथ ग्रोजसेटोमा भिटर्बो
एउटा ट्रेनको साथ रोममा ग्रोस्सेटो
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं7रेल द्वारा युरोपमा उत्तम ग्लिमिंग स्थानहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Best उत्तम ग्लेम्पि Pla स्थानहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-glamping-places-europe%2F%3Flang%3Dneاور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BestGlampinginEurope शिविर GalmpingPlacesInEurope glamping GlampingDestinationsEurope GlampingPlaces LuxuryCampingEurope पाल Winterholiday